Heparin Sodium Price, Alaab -qeybiye ka socda Bolise
[Qaaciddada Molecular] ca. (C12H16NS2Na3) 20
[Miisaanka Molecular] ca. 12000
[Muuqaal] Caddaan ilaa budada Beige
Ku saabsan Heparin Sodium
Heparin sodium waa nooc ka mid ah walaxda mucopolysaccharide oo leh saameyn xinjirowga lidka ku ah. Waa daawada xinjirowga lidka ku ah ee inta badan loo isticmaalo daaweynta. Waxay leedahay xinjirowga lidka ku ah, antithrombotic, anti-bararka, qawaaniinta lipid dhiigga iyo yareynta viscosity dhiigga, daaweynta gubashada iyo maqaarka, iwm. Waxaa loo adeegsaday alaabta daryeelka maqaarka, waxay leedahay saamaynta kordhinta dheecaanka xididdada maqaarka, hagaajinta wareegga dhiigga ee deegaanka, ka saaridda bacaha indhaha, ka saaridda wareegyada mugdiga ah, ka-hortagga bararka, iyo dib-u-dhaca gabowga maqaarka.